Puntland oo qorsheyneysa guluf ka dhan ah burcad badeeda Somalida ah ee ka ugaarta badweynta Hindiya. – Radio Daljir
Abriil 6, 2010 12:00 b 0
Bossaso Apr, 06 – Dawladda Puntland ayaa diyaarineysa weerar ballaaran oo ka dhan Burcad-badeedda sida ay sheegeen saraakiil millateri oo jooga magaalada Bossaso, halkaasi oo laga abaabulayo gulufka dagaal.
Qorshahaan ayaa ku dhashay dawladda Puntland markii ay Burcad-badeeddu bilawday inay beegsadaan shixnadaha ganacsi ee ku wajahan Somaliya iyo doonyaha xoolaha sida ee ka baxaya dalka sida uu horay u sheegay wasiirka amniga ee Puntland Gen, Yuusuf Axmed Kheyr.
Taliyaha ciidamada Booliska ee gobolka Bari Cismaan Xasan Cali Afdalay ayaa shir uu shalay ku qabtay magaalada Bossaso ku sheegey inay Burcadda badaha ka badbaadiyeen doon laga lahaa dalka Cummaan oo ay afduubeen 1-dii bishan taasi oo ka shiraacatay magaalada Berbara kuna sii jeeday dalka Cummaan, waxaana intaasi ku daray inay dhaawaceen dhawr burcad ah balse ay dhammaan tood baxsadeen.
Abuulka cusub ee dawladda Puntland ee ku wajahan Burcad-badeedda ayaa imaanaya iyadoo dhawaan PL lagu eedeeyey inay xiriir la leedahay Burcadda badaha, waxaase la is weydiinayaa heerka ay gaarsiisan tahay awoodda Puntland ay hujuumeyso jirri badeedda.
Axmed Sh, Maxamed Tallman http://daljir.com/